कश्मीरको स्थिति | eAdarsha.com
१. जम्मु–कश्मीर राज्यका सम्बन्धमा भारतले बडो कठोर कदम चालेको छ। जसलाई भारतले ऐतिहासिक भनेको छ। भारत सरकारको त्यो संवैधानिक निर्णयले जम्मु–कश्मीर राज्यले हिजोसम्म विशेष राज्यको जुन अधिकार पाएको थियो। त्यसको अन्त भएको छ। अब जम्मु–कश्मीर राज्य पनि भारतको अन्य राज्यसरह एक राज्य भएको छ।
२. भारत सरकारको त्यो निर्णयले जम्मु–कश्मीरको जुन फरक झण्डा थियो, त्यसको साटो अब त्यहाँ भारतकै झण्डा फहराएको छ। त्यो अब स्वायत्त राज्य नभई केन्द्र शासित राज्य भएको छ र त्यसले भारतकै संविधान अन्तर्गत चल्नपर्ने भएको छ। त्यसको साथै त्यस राज्यमा अन्य भारतीयले अचल सम्पत्ति किन्न नपाउने जुन प्रावधान थियो, त्यसको पनि अन्त भएको छ।
३. जम्मु–कश्मीरको विवाद भारत र पाकिस्तानको विभाजन भएको बेला देखिको हो। त्यो विवादले धेरै उकाली ओराली पार गर्यो, तर समाधान भएन। त्यो विवाद संयुक्त राष्ट्र संघमा पनि पुग्यो। राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदले सन १९४८ मा जनमत संग्रह गरी यो मामिला टुङ्गयाउने निर्णय गर्यो। त्यो पनि भएन।
४. कश्मीरको एक भाग पहिलेदेखि नै आजाद कश्मीरको नाममा पाकिस्तानतिर छ भने जम्मु–कश्मीर भारततिर छ। विभाजित कश्मीर एक भएर स्वतन्त्र कश्मीर बनाउने विचार पनि आएको थियो। तर त्यो विचार टिक्न सकेन। कश्मीरको विषयलाई लिएर त्यसै बेला देखि भारत र पाकिस्तान बीच गहिरो मतभेद छ। तिनीहरुले युद्ध पनि गरिसकेका छन्।
५. गएको आम निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीले जितेपछि भाजपाको सरकारले केही न केही ठूलो कदम चाल्ने आशंका गरिएको थियो। केही हप्तादेखि आतड्ढकारीहरुलाई रोक्ने नाममा सरकारले ठूलो संख्यामा त्यहाँ आर्मी परिचालन गरिसकेको छ। सरकारले त्यहाँका पूर्व मुख्यमन्त्रीहरु उमर अब्दुल्ला, महबुवा मुफ्तीलगायतका नेताहरुलाई गिरफ्तार गरिएको छ र मुख्य सडकमा कर्फ्यू लगाइएको छ।
६. केही नेताहरुले सरकारले संविधान संशोधन गरेर जम्मु–कश्मीर राज्यसँगको संवैधानिक मान्यता र विश्वास तोडेको आरोप लगाएका छन्। तर अधिकांश भारतीयहरुले खुशी व्यक्त गरेकाछन्। उनीहरुले खुशीव्यक्त गरेका मात्र होइनन्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ऐतिहासिक पुरुषका रुपमा स्थापित गर्ने प्रयाससमेत गरेका छन्।
७. सरकारले त्यहाँका नेताहरुलाई थुनेको छ। कफ्र्यू लगाएको छ। ३० हजारभन्दा बढी सैनिक सडकमा उतारेको छ। स्थिति भयानक र संवेदनशील देखिन्छ। स्कूल, कलेजहरु बन्दछन्। सञ्चारका साधनहरु बन्दछन्। केही समय त्यहाँको यथार्थ कुरा बाहिर आउन सक्ने छैन। स्थिति विस्फोटक पनि हुन सक्छ। तर के हुने हो, केही साता केही भन्न सकिने अवस्था छैन।